"Waxaan rabnaa inaan saddex maalmood si khasab ah ku xirno garoonka diyaaradaha ee London" - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, LONDON CITY AIRPORT
Garoonka diyaaradaha ee magaalada London
Nin ka mid ah mudaharaadeyaasha xoogeystay ee ka careysan isbaddalka cimilada adduunka ayaa laga soo dajiyay diyaarad ka duuli rabtay garoonka London City Airport, waxayna dhacdadaasi qeyb ka ahayd dibadbaxa hadda socda.
Madaxweyne khudbad jeediyay isagoo biyo hoostood ku jira
Wariye Nicholas Watt ayaa sheegay diyaaraddii uu la socday ee ka baxeysay London City Airport kuna sii jeeday magaalada Dublin ay ku sugneyd cirifka ugu dambeeya ee laamiga ay diyaaradaha ku ordaan markii "nin si qurux badan u labisan" uu kursigiisa ka kacay ka dibna billaabay inuu diyaaradda ku dhex socdo, isagoo akhrinaya khudbad ku saabsan isbaddalka cimilada.
Shaqaalihii diyaaradda ayaa "si daggan oo akhlaaq leh" uga codsaday inuu fadhiisto, laakiin markii uu diiday ayey u qeylo dhaamiyeen duuliyeyaashii, sida uu Watt ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Xigashada Sawirka, Henry Nicholls/Reuters
Booliska ayaa qaaday qaar ka mid ah mudaharaadeyaasha
Dibadbaxayaasha isbaddalka cimilada ayaa isku dayayay inay garoonka diyaaradaha xiraan muddo saddex maalmood ah, "sidii ka dhacday garoonka Hong Kong".
"Waxaan sii wadi doonnaa inaan si dhow ula shaqeyno booliska magaalada, si loo xaqiijiyo habsami u socodka howlaha garoonka, oo hadda si caadi ah u furan", ayuu kusii daray hadalkiisa.
Xigashada Sawirka, Kirsty O'Connor/PA Wire